Ama-cranberry kushukela: izakhiwo eziwusizo kanye ne-contraindication > Ukudla ngesifo sikashukela
Ama-cranberry wesifo sikashukela sohlobo II
Ama-cranberry ayibhungane elinempilo kakhulu eliqukethe inani elikhulu lamavithamini, amaminerali nezakhi zomkhondo. Kuthuthukisa ukungatheleleki futhi ithuthukise inhlala-kahle, kubandakanya nesifo sikashukela.
Ama-cranberry aqukethe ama-acid ahlukahlukene emvelaphi ye-organic: i-quinic, i-benzoic, ne-citric. Ngaphezu kwalokho, amajikijolo aqukethe izinhlobo eziningana ze-pectin, amavithamini anjenge-B1, C, PP, B6, B2. Rk. Ama-cranberry agcwala umzimba nge-iodine. Futhi ukwakheka kwalo kufaka amaminerali ahlukahlukene nezinto zokulandela: i-iron, potassium, phosphorus, calcium.
Njengomuthi, kukhiqizwa i-cranberry, etholakala ngenkathi kucutshungulwa amajikijolo. Ubukeka njengoketshezi obukhulu ngombala obomvu omnyama. Ukunambitheka kwe-akhiphe ku-munyu, ku-astringent. Ngefomu elihlanjululwe lusetshenziselwa ukulungiselela iziphuzo zezithelo ezahlukahlukene nejelly. Ukukhishwa kwe-cranberry kufakwe futhi kwizinti zamakhambi kanye nama-decoctions.
Ukukhishwa kwe-cranberry kungasusa izimpawu zomkhuhlane kanye nezimpawu ze-hypovitaminosis. Nge-pyelonephritis, ujusi we-cranberry uthuthukisa umphumela wezidakamizwa ze-antibacterial futhi usheshise kakhulu ukululama.
I-Kissel, i-compote noma isiphuzo sezithelo kusuka ku-cranberry ekhishwe isetshenziselwa izifo ezihlangene. Ibuqeda ngokushesha ubuhlungu obenzeka nge-rheumatism. Ama-cranberry asetshenziselwa nezifo zamehlo, izifo zesifo somlomo wesibeletho nakwezinye izindawo eziningi zemithi.
Isigaxa se-Cranberry Yesifo Sikashukela
Odokotela bavunyelwe ukuthi badle ama-cranberries wesifo sikashukela. Le berry emuncu ilusizo ngisho nakulesi sifo: isiza ushukela wegazi ophansi. Ngoshukela wohlobo loku-1, ama-cranberry ngeke alethe ukuthuthuka, kepha ngeke kube nemiphumela eyingozi. Amazinga kashukela ahlala emazingeni amukelekile.
Ama-cranberry ohlobo 2 sikashukela avame ukusetshenziswa njengesidakamizwa esingeziwe. Lapho isiguli sidla ukukhishwa kwalesi berry nganoma yiluphi uhlobo, kukhona ukuncipha koshukela wegazi, okuthuthuka inhlala-kahle. Ngomphumela obonakalayo, kwanele ukuphuza ingilazi eyodwa kalamula we-cranberry, isiphuzo sezithelo noma i-cranberry tincture ngosuku.
Ngaphezu kwalokho, ngesifo sikashukela, kuyasiza ukuphuza itiye njalo emacembe e-cranberry. Lesi siphuzo asigcini nje ngokujwayeza ushukela wegazi, kodwa futhi sivuselela ama-pancreas, ngenxa yalokho aqala ukusebenza kangcono. Ama-cranberry awakwazi ukufaka esikhundleni semithi, kepha njengesengezo futhi umuthi nje omnandi wesifo sikashukela, ngeke kulimaze.
Ama-cranberry angumkhiqizo ophansi kakhulu wekhalori. Ama-100 g amajikijolo aqukethe cishe ama-27 kcal. Lesi ngesinye isizathu esenza ukuthi kungabi yingozi kwiziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2. Umphumela osebenzayo wama cranberry ushisa abantu abangenampilo, futhi ikakhulukazi abanesifo sikashukela, cholesterol.
Ama-cranberry angadliwa amasha, apheka ama-cranberry jelly ahlukahlukene, ama-compotes, iziphuzo zezithelo. Ungalungiselela ama-cocktails amnandi futhi ahlukahlukene ngokufaka isengezo esincane se-cranberry.
I-Berry ingafakwa kwimenyu njengesithako esingeziwe kumaladi ehlukene emifino nezithelo. Futhi ujusi ungasetshenziselwa ukugqoka, isoso noma i-marinade. I-isipuni ezimbalwa z ujusi we-cranberry sizongeza i-acidity emnandi kwamanye amajusi amasha, ama-jusi neziphuzo zezithelo.
Ingilazi yejusi ye-cranberry nsuku zonke izinyanga eziningana kuyalwa ukuphuza izazi eziningi zokudla okunempilo. Kuyithuthukisa kakhulu inhlala-kahle yeziguli, ithuthukise ikhwalithi yempilo. Umthamo othize uzosiza udokotela oholayo ukuthola. Ijusi lingathathelwa indawo nge-cranberry ekhishwe, ithengwe ekhemisi.
Contraindication yesifo sikashukela se-cranberry
Ngaphandle kwazo zonke izimfanelo eziwusizo, ama-cranberry awakwazi ukusetshenziswa kuzo zonke iziguli ezinesifo sikashukela. Akunconyelwe ukwenza lokhu kubantu abanezinkinga zokuhamba kwamathumbu emathunjini, ngoba i-berry likhulisa kakhulu i-acidity. Ama-cranberry anqatshelwe ezigulini ezine-duodenal ulcer kanye ne-gastrointestinal, kanye ne-gastritis ene-secretion ekhulayo.
Ngaphambi kokuncoma ujusi we-cranberry futhi ukhiphe ezigulini ukuze uthuthukise isimo sabo, udokotela kufanele enze ukuxilongwa. Awungeke udle ama-cranberry ngamatshe wezinso noma wesinye. Ngakho-ke, abanesifo sikashukela kufanele badle ngokucophelela ama-cranberries ngamanani amakhulu, kungcono ukubonana nodokotela kuqala.
Ama-Cranberries for sikashukela: kungenzeka noma kungenzeki
Lesi isigaxa esimnandi esimuncu esimuncu sombala obomvu, sisetshenziswa okhokho futhi manje saziswa kakhulu ngodokotela kanye nabezempilo. Umkhiqizo usetshenziswa ekwelapheni umkhuhlane ohlukahlukene, ukuvimbela i-endocrine kanye ne-vascular pathologies. Ukwakheka kukavithamini we-marsh berry kukuvumela ukuba welaphe cishe wonke umzimba womuntu.
Njengoba kunikezwe ukuthi isifo sikashukela yisifo esisehlelweni, ukuthatha i-Vitamin Shake emthonjeni wemvelo iba yisinyathelo esithandekayo nesidingekile sokuba isiguli sithuthukise inhlala-kahle yaso. Njenganoma yisiphi esinye isithelo ekudleni kwesiguli esinesifo sikashukela, cabanga ngokungafani kokuqukethwe kwe-carbohydrate.
Ama-cranberry aphansi kushukela, umkhiqizo ophansi we-glycemic index. Ubumnandi obukuwo butholakala ngenxa yefrose, okusho ukuthi abanesifo sikashukela bathatha amabhele ukuze badle ngaphandle kokusaba ukwanda koshukela wegazi. Kodwa-ke, kunoma yisiphi isithelo noma i-berry kunenani elanele lama-carbohydrate ngaphandle kwe-glucose. Inkomba ye-glycemic yama cranberries ngamayunithi angama-45. Lokhu kuphansi kunalokho kwamagilebhisi noma amakhabe, kepha kufakwa kunganakwa ukubalwa kwamayunithi wesinkwa, ngakho-ke lapho usebenzisa kuyadingeka ukuqapha inani lomkhiqizo.
Odokotela bayavuma ukuthi ama-cranberry ohlobo 2 lwesifo sikashukela azuzisa kakhulu kunokuba ayingozi. Ngaphandle kwesidingo sokunciphisa umkhawulo womkhiqizo, ukusetshenziswa kwawo njalo ngesifo sikashukela kusiza abantu abancike kuma-insulin ukuthi babuye kokujwayelekile ngenxa yezakhiwo zabo ezizuzisayo.
Ngabe iqukethe kanjani i-cranberry
Nalu uhlu lwamavithamini aphambili kulo, isimo sabo sansuku zonke kumuntu (ngokususelwa ku-100 g amajikijolo):
I-B5 (6%) - iyadingeka ezinqubweni ze-metabolic kanye nokuhlanganiswa kwe-insulin,
C (15%) - i-antioxidant, yehlisa inani le-hemoglobin ye-glycated,
I-E (8%) - inyusa ukuqina kwezindonga zemithambo yegazi, isiza ukunciphisa i-cholesterol,
Mg (18%) - ulawula amazinga kashukela, uvikela isibindi,
I-Cu (6%) - inikezela oksijini kwezicubu, ivikela imicu yezinzwa.
Ama-cranberry ohlobo 2 sikashukela awanikeli umzimba zonke izinto ezidingekayo ngobuningi obuvunyelwe ukusetshenziswa (ngokungafani neklabishi elimhlophe noma okhalweni lwe-rose). Kodwa-ke, umphumela wokwelapha oyinhloko awukho ezintweni ezilandelwayo, kepha kuma-organic acid (3% ngesisindo samajikijolo). Ama-cranberry aqukethe ama-asidi alandelayo:
ulamula - i-antioxidant, umhlanganyeli we-metabolic,
ursolic - uyakwazi ukukhuphula amaphesenti wamasipha omzimba futhi ehlise okuqukethwe kwezicubu ze-adipose emzimbeni,
i-benzoic - ayivumeli igazi ukuba lenze ukuhlangana ngamazinga kashukela akhuphukayo,
hinnaya - ithuthukisa izinqubo zokwenziwa kabusha futhi inciphisa okuqukethwe kwama-lipid egazini,
I-chlorogenic - i-antioxidant, inomphumela we-hepatoprotective futhi inciphisa amazinga kashukela,
i-oksiyantarnaya - isakhi esisebenzayo esinomfutho wegazi ophakeme, sithuthukisa ithoni ephelele yomzimba.
Ama-cranberry ohlobo 2 lwesifo sikashukela anezindawo zokwelapha ezilandelayo:
Inemiphumela elusizo kuma-metabolism, ikakhulukazi ama-carbohydrate kanye ne-lipid metabolism, isiza ukubhekana nokukhuluphala futhi inciphise noshukela wegazi.
Kuvimbela ukwakheka kwamapulangwe e-lipid ezindongeni zemithambo yegazi futhi andise ukuqina kwawo, kuvimbela ukuqina kwegazi.
Inomphumela wokuvimbela ekubukekeni kwe-angiopathy.
Kuthuthukisa ukuhanjiswa kwegazi kwizicubu, kuvimbela unyawo lweshukela, isikhumba ne-necrosis yomlenze.
Isiza ngokwejwayelekile izakhiwo zegazi ezihlangene.
Kunobufakazi bomsebenzi we-antitumor. Ngokwezibalo, kubantu abanesifo sikashukela, isimila, kuhlanganise nesinonya, sivela kaningi kunakwabaphilile. Ukudla okuvimbela i-tumor kuyinto efiselekayo ekudleni.
Yehlisa ushukela emchameni futhi, ngenxa yalokho, ivimbela ukukhula kwezifo zezinso nepheshana lomchamo.
Kuthuthukisa ukusebenza kwe-retinal, kusiza ukugcina umbono.
Yehlisa umfutho wegazi, ngaleyo ndlela iba nomthelela wokuvimbela ohlelweni lwezinhliziyo nokuvimbela ukuvela kwe-glaucoma.
Ama-cranberry aqinisa noma yiziphi izidakamizwa ze-antibacterial, futhi amavithamini C ekwakhiweni kwawo athuthukisa ukungatheleleki, asiza ukulwa nezifo ezithathelanayo nezinye. I-berry inomthelela ojwayelekile wokuqinisa emzimbeni, obalulekile empilweni ebuthaka yeziguli ezinesifo sikashukela.
I-berry iqukethe amayunithi wesinkwa angama-45. Ngejusi, leli nani ngamayunithi angama-50. ngama-gramu ayi-100. Ukudla okunesifo sikashukela kufaka kuze kufike ku-150 g womkhiqizo, kucatshangelwa isakhi se-carbohydrate sokudla okunye kwansuku zonke. Amajikijolo adliwa emisha, omisiwe noma omisiwe. Ngemuva kokuphambuka, cishe abalahlekelwa ukunambitheka kwabo. Izithelo zengezwa ezitsheni zenyama, kulungiswa iziphuzo, ophudingi:
Ama-cranberry enza ijeli elimnandi. Ukuze wenze lokhu, thatha i-100 g lamajikijolo, uchoboze odakeni, ubilise ngamalitha ayi-0,5 amanzi imizuzu emi-2. Preak cwilisa i-15 g ye-crystalline gelatin. Lapho ivuvukala, uthele emhlanjini bese ubilisa futhi. Faka u-15 g we-xylitol (i-powder emnandi) noma enye i-sweetener koketshezi oluphumayo, isiyaluyalu. Thelela isikhunta nesiqandisini amahora angama-2-3. Le iresiphi inenkomba ephansi ye-glycemic ehambelana noswidi ojwayelekile futhi ihlukanise nokudla kwesiguli onesifo sikashukela.
Ukulungiselela i-cranberry sauce yenyama, dlula ama-150 g amajikijolo nge-blender, hlanganisa ne-zest ye-orange, engeza isinamoni nezimbali ezi-3 ze-clove. Bilisa ingxube ephumayo imizuzu emi-5 ngaphezulu kokushisa okuphakathi. Bese uthele i-100 ml yejusi lewolintshi bese uyishiya ifudumele eminye imizuzu emi-5.
Ukwenza iziphuzo zezithelo (1.5 L), thatha ingilazi yama-cranberry (250 ml), ucindezele amajikijolo nge-pestle bese uxubeka nge-cheesecloth. Faka ijusi endishini ehlukile, bese uthele ikhekhe ngamalitha ayi-0,5 wamanzi abilayo, upholile kancane bese uxubha. Faka i-sweetener kanye nejusi ku-ukumnika.
Abelaphi bendabuko batusa izindlela ezahlukahlukene zokusebenzisa ama-cranberry ukwehlisa ushukela wegazi. Ujusi we-cranberry udakiwe usanda kufakwa. Ukuze wenze lokhu, deda amajikijolo, cindezela uketshezi esitsheni. Thatha izingilazi ezi-2/3 ngosuku.
Ukuvikela isisu, leli nani langaphambilini lihlanjululwe kwisilinganiso se-½ ngamanzi abilisiwe. I-sweetener ingezwa ngokuzikhethela.
Izingcindezi zenziwa ngokufakwa kwe-cranberry: wezipuni ezi-3 zamajikijolo ancibilikisiwe athululelwa ngamanzi abilayo kuze kutholakale ukuvumelana okungamanzi. Isitsha simbozwe ngengubo noma ithawula, sifakwa endaweni efudumele cishe amahora ayi-6. Ngokushesha ngaphambi kweseshini, i-gauze ehlanzekile ifakwa kumanyolo kusisombululo futhi sisetshenziswa onyaweni. I-compress ibanjelwa imizuzu eyi-15, ngemuva kwalokho isikhumba some futhi siphathwe nge-baby powder. Inqubo ivimbela ukusabalala kokutheleleka, isiza ekwelapheni imifantu emincane namanxeba.
Inani le-berry nokwakhiwa kwalo
I-Cranberry berry ithathwa njengenye yamajikijolo ahlukile kakhulu futhi anempilo emhlabeni. Inothile ngamavithamini, amaminerali, ama-macro kanye nezinto ezilandelwayo.
Cabanga ngokuningiliziwe ukwakheka kwama-cranberry ngendlela yetafula:
Amaqiniso we-Cranberry Nutrition Amaminerali Amavithamini Ezinye izinto ezizuzisayo
Amakhalori angama-28 Magnesium Thiamine Ama-Anthocyanins
Amaprotheni 0.5 g I-calcium Riboflavin I-Fructose noshukela
I-carbohydrate 3.7 g Iphosphorus I-Pyridoxine Ama-bioflavonoids
Amafutha 0,2 g Potassium I-Folic acid Ama-Pectins
I-fiber 3.3 g Isodiyamu I-PP Phylloquinone
Amanzi 88,9 g Copper Nge
Asidi 3.1 g Manganese E
Ngenxa yokusebenziseka kwayo okuphezulu nokuqukethwe okuphansi kwekhalori, ama-cranberry angadliwa cishe yiwo wonke umuntu: izingane, abantu abadala, asebekhulile, abadli bezikhathi zokudla kanye nabanesifo sikashukela.
Umphilisi ohlungayo: ngezinzuzo nezindlela zokusebenzisa ama-cranberry zohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela
Ama-cranberry ayibhungane elinempilo elisiza ukubhekana nezifo eziningi. Kusebenza kahle kakhulu kuhlobo lwe-2 yesifo sikashukela, okuyinto ama-endocrinologists alwazisa kakhulu.
Kepha ngezinhlobonhlobo zokuqala zesifo, ngeke kulethe noma iyiphi inzuzo ebalulekile. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi i-berry ayikwazi ukukhuphula ushukela wegazi.
Lo mkhiqizo ngeke ulimaze noma udliwe ngamanani amakhulu. Ukusuka kulo ungapheka izitsha ezahlukahlukene: ama-jusi, iziphuzo zezithelo, ijeli, izithelo ezidliwayo. Ngaphezu kwalokho, ama-cranberry nawo angadliwa amasha, futhi.
Ngosizo lwayo, ungakushintsha ngokweqile ukudla kwesiguli ehlushwa yilesi sifo se-endocrine esinzima. Ngakho-ke, ingabe i-cranberry ilusizo kushukela, iphonsa ushukela noma cha? Izimpendulo zale mibuzo zingatholakala esihlokweni esingezansi.
Ama-cranberry acebile ngamavithamini anjenge-E, C, PP, K neqembu B.
Ibuye ibe nokuqukethwe okuphezulu kwama-asidi azuzisayo: i-quinic, ascorbic, i-oleanolic, i-ursolic, i-chlorogenic, i-malic, i-benzoic, i-presinic, kanye ne-oxalic.
Ukwakhiwa kwe-berry kuqukethe izinto ezinjenge-fructose, ushukela, i-betaine, i-bioflavonoids, i-pectin compounds nezinto eziningi ze-macro nezincane.
Inani lamandla ama-cranberry angama-26 kcal nge-100 g.
Impahla eyinzuzo enkulu yalesi sitshalo ukukhipha kwayo okuhlukile. Kulokhu, sikhuluma ngoketshezi obomvu-obomvu ngokunambitheka okubushelelezi okune-acidity ebonakalayo.
Ukusuka kulo ungadala iziphuzo zezithelo, i-jelly, kanye namajusi. Lokhu kukhishwa kungasetshenziswa ukwenza itiye le-herbal.
Inokusizakala okukhulu, ikakhulukazi ngesifo sikashukela sohlobo 2. Kepha ingabe i-cranberry yehlisa ushukela wegazi? Kungekudala kakhulu, kwatholakala ukuthi ama-cranberries anciphisa ushukela wegazi kushukela.
Lo mphumela ongenakuphikwa wesitshalo okukhulunywa ngaso uchazwa ngekhono lakhona lokuguqula amanyikwe. Kungenxa yalesi sizathu-ke ukuthi kungakuhle ukuthi usebenzise itiye elisuselwa ku-cranberry, izinto ezingavuthiwe ezingamaqabunga esitshalo. Ngokusho kochwepheshe abaningi, ujusi othelwe ku-cranberry usiza ukuthuthukisa ikhwalithi yempilo yohlobo 2 sikashukela.
Ukuze uzuze imiphumela ephezulu, kufanele uphuze cishe ama-250 ml wejusi le-cranberry nsuku zonke izinsuku ezingamashumi ayisithupha.
Musa ukuthatha ikhefu kulokhu kwelashwa. Uma ufisa, ungakufaka endaweni ekhishwe.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ujusi we-cranberry kufanele usetshenziselwe ukulungisa izitsha ezahlukahlukene. Izinzuzo ezinhle zomzimba zizoletha ujusi we-karoti ne-cranberry, ezixutshwe ngezilinganiso ezilinganayo. Ama-cranberry asiza hhayi kuphela ngokuphazamiseka kwe-endocrine, kodwa futhi nezinye izifo ezifana ne-cystitis, i-thrombosis, i-varicose veins kanye ne-hypertension.
Ukuba khona kwe-antioxidant ku-berry kusiza ukwelula ubusha. Ama-cranberry ahlanganiswe ngokuqinile ku-gastritis ene-acidity ephezulu ne-peptic ulcer. Umhluzi omusha we-cranberry usetshenziswa njenge-ejenti enamandla yokulwa nokuvuvukala. Ngaphezu kwalokho, kuklanyelwe ukubuyisa ngokushesha ibhalansi yamanzi kanye neyamaminerali uma kwenzeka ubuthi obukhulu kanye nokuphelelwa ngamandla.
IMorse isiza ekuhlanzeni umzimba wezinto ezinobuthi, ikhulule umkhuhlane futhi iphinde inikeze ithuba lokutheleleka ngegciwane.
Phakathi kokunye, ujusi we-cranberry uthuthukisa ukugcinwa nokusebenza kohlelo lokugaya ukudla. Ijusi nomhluzi zinomphumela omuhle we-bactericidal kanye nekhono lokuqeda konke okungafuneki kwe-microflora ye-pathogenic.
Isetshenziselwa i-staphylococcus aureus nezinye izifo ezithathelanayo zamathumbu. Kusetshenziswa izithasiselo ze-Berry ukwelapha izifo zohlelo lokuzala nokuzala.
Lo mkhiqizo usetshenziselwa ukulungisa iziphuzo zezithelo, ama-juices, amasiraphu, ukulondolozwa, ujamu, ama-jellies, ama-marmalade, ama-mousses, ama-cocktails, iziphuzo nezithelo ezihanjisiwe.Ngokuvamile ama-cranberry asetshenziselwa ukudala imikhiqizo ehlukahlukene ye-confectionery. Ngaphezu kwama-dessert, le berry isetshenziselwa ukulungisa amasoso amnandi futhi amuncu ezitsheni zenyama nezinhlanzi.
Abantu abanesifo sikashukela benqatshelwe ngokuqinile ukudla ukudla okususelwa ku-cranberry aqukethe ushukela ocolisisiwe. Uma isiguli singeke siphile ngaphandle kwama-dessert, ngakho-ke kungcono ukuzipheka ngokwakho usebenzisa izikhala zikashukela.
Ingabe ama-cranberry angaba kushukela?
Ekubukeni kokuqala kuphela kubonakala sengathi ama-cranberry amancane namajikijolo angafinyeleleki, angahlukanga ukunambitheka okukhethekile noma ukubukeka okumnandi.
Kepha, ngasikhathi sinye, inenqwaba yezici ezinhle.
Phakathi kwazo kukhona izakhiwo zayo eziningi ezizuzisayo namavithamini, ngenxa yokuthi kungaba ngumncintiswano kunoma yisiphi isithelo noma i-berry exotic. Ngakho-ke kungani i-cranberry inconywe yi-endocrinologists yohlobo 2 lwesifo sikashukela?
Ekwelashweni kwesifo sikashukela ezigulini ezihlala zidla lezo zithelo, kwenziwa lezi zinguquko ezilandelayo ezinhle:
ukwehla okubukhali kwengcindezi yegazi kube uphawu olujwayelekile,
ukuthuthuka okukhulu ekusebenzeni kohlelo lokugaya ukudla,
ngcono ukusebenza kahle kwezitho zohlelo lwe-excretory,
ukuqiniswa kwemithambo (ukunciphisa izibonakaliso zemithambo ye-varicose).
Hhayi njalo izifo eziphawulekile zemvelo esithathelwanayo nokuvuvukala ezigulini ezadla i-cranberry isikhathi esithile. Futhi, amathuba okugula ngezifo ezahlukahlukene zokuvuvukala, ikakhulukazi ezi-cutaneous, anyamalale ngokuphelele.
Futhi, le berry inenzuzo eyodwa ehlukile: iyakwazi ukuthuthukisa umphumela omuhle wazo zonke izidakamizwa ze-antibacterial. Ngenxa yalokho, umthamo wabo wansuku zonke ungancishiswa kakhulu. Kepha kwezinye izimo ezikhethekile, ungenqaba ngokuphelele ukuthatha izidakamizwa ezilwa namagciwane kunoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela.
Ama-cranberry kushukela wesifo sikashukela andisa imisebenzi yokuvikela umzimba, ayivuselele, avikele ukuguga ngaphambi kwesikhathi.
Kuyaqapheleka ukuthi ngezindlela ezibucayi zesifo se-endocrine zohlobo lwesibili olucubungulwayo, kubaluleke kakhulu ukuvikela ukubonakala kwezilonda ezikhuluphele kanye nesimo esinjengobulelesi.
Kulokhu, i-berry eyingqayizivele izosiza ngokuphelele kulokhu, ivuselela ukuvuselelwa kwezicubu futhi ngasikhathi sinye ukuvimba ukubukeka kwamangqamuzana angaphandle nalawo angafuneki.
Bambalwa abantu abazi ukuthi ama-cranberry angasiza ekuthuthukiseni ukubuka, ngoba alondoloze igazi elijwayelekile kanye nengcindezi ye-intraocular. Ingozi ye-glaucoma enalesi sifo se-endocrine yohlobo lwesibili incishiswa kakhulu.
Yehlisa noma ingeza ingcindezi?
Ama-cranberry aqukethe ama-flavonoids, asiza ama-capillaries ukuba aqine futhi abe namandla. Futhi, lezi zinto zinomthelela ekufakweni okungcono kwe-ascorbic acid.
Amajikijolo kanye namaqabunga alesi sitshalo aqukethe i-ursolic ne-oleanolic acid, eyaziwa ngemiphumela yokulwa nokuvuvukala nokulimala kwamanxeba.
Njengoba umfutho wegazi ophakeme uthathwa njengesifo esijwayelekile, kuphakama umbuzo ngokushesha: ingabe ukhula lwenqubu luyenyuka noma luyancipha ingcindezi?
Ngokusho kocwaningo oluningi, kwatholakala ukuthi ujusi wayo uqukethe izinto ezikhulisa ukugcwala kwama-antioxidants emzimbeni kanye ne-cholesterol "efanele". Lezi zingxube zidingeka kakhulu kumuntu ukuba nokusebenza okujwayelekile kwemisipha yenhliziyo.
Abantu abahlushwa yizifo zohlelo lwezinhliziyo kudingeka baphuze izingilazi ezimbili zikamozi we-cranberry nsuku zonke. Ososayensi baqaphele ukuthi le berry inethonya elihle emzimbeni, yehlisela umfutho wegazi ibe yinto evamile.
Ama-cranberry ohlobo 2 sikashukela: izindlela zokupheka nezincomo
Kunenqwaba yezindlela zokupheka zezitsha neziphuzo ezivela kuleli bheri, eziwusizo oluthile.
Ukuze wenze isidlo sikashukela sehluke kakhulu, kwanele ukusebenzisa izindlela zokupheka ezilandelayo zama-cranberries:
jelly. Ukuyilungisa, cindezela ujusi kusuka ku-200 g wamajikijolo amasha. I-pomace ephumayo ithululelwa kungilazi ezine zamanzi futhi zilethwe ngamathumba phezu kokushisa okukhulu. Ngemuva kokuthi ama-cranberries ahlungiwe, i-gelatin ifakwe kuqala elilingana lejusi ithululelwa emhluzi. Umthamo odingekayo ngu-6 g wokuqina okungcono. Okulandelayo, isisindo kufanele siphinde sibekwe ngomlilo sibuye sibiliswe. Kunconywa ukuyibilisa ngaphezulu kokushisa okuphansi. Ngemuva kokubilisa, kuyadingeka ukuthulula ujusi osele no-30 g we-xylitol kumxube we-gelatin. Isinyathelo sokugcina ukuthululela inqwaba ekubumbeni,
ujusi kusuka kuma-cranberry kanye izaqathi. Kuyadingeka ukulungiselela izingxenye ezimbili ze-cranberry ne-karoti juice, okufanele kuxutshwe kahle,
iqhude. Ngalo, kufanele ulungiselele i-100 g ye-cranberry puree ne-300 g ye-kefir engenamafutha. Ngemuva kwalokho kufanele bashaywe ngokuphelele nge-mixer noma nge-blender,
isaladi. Ukulungiselela kwayo, kuyadingeka ukulungiselela i-sea kale nama-cranberry, axutshwe ndawonye futhi ayoliswe ngososo ofanele.
Ama-cranberry wesifo sikashukela sohlobo 2: kungenzeka ukuthi udle abantu abanesifo sikashukela
Ama-cranberry - amajikijolo amancane angaqheneki, angahlukaniswa ukunambitheka kwawo okumnandi noma ukubukeka okumangazayo. Kepha ngasikhathi sinye, ngokuya ngenani lezinto eziwusizo kanye namavithamini, kunganikeza ukungathandeki kunoma yisiphi isithelo esingajwayelekile.
Ama-cranberry asetshenziswa indawo yonke, kufanelekile ekwelashweni nasekuvimbeleni izifo ezahlukahlukene. Umkhuhlane ojwayelekile obangelwe yigciwane, noma ukukhubazeka okukhulu kwe-hormonal emzimbeni - lesi sakhamuzi esimnandi nesimuncu samahlathi namaxhaphozi sizosiza yonke indawo.
Ama-cranberry kushukela awusiyo i-panacea, akunakwenzeka ukuselapha ngalesi berry kuphela. Kodwa lapha ukuvikela izinkinga eziningi, ukwenza ngcono impilo ephelele, qinisa umzimba ngaphandle komzamo ngisho nangenjabulo - ukunambitheka kwama-cranberry kuyaqabula futhi kumnandi.
Kungani ama-cranberry anconyelwa uhlobo 2 sikashukela
Ekwelapheni lesi sifo ezigulini ezihlala zidla ingxenye yalawa mazithelo, kwaphawulwa okulandelayo:
ukwenziwa Kwejwayelekile kwemisebenzi yezinso,
ukuqiniswa kwemithambo (ukwehliswa kwezimpawu zemithambo ye-varicose).
Izifo ezithathelwanayo kanye ne-edema bezingatheni kakhulu, izinqubo zokuvuvukala, kufaka phakathi ezi-cutaneous, zazingakhathazeki kangako. Impahla eyingqayizivele futhi ebaluleke kakhulu yama-cranberry ngohlobo 2 sikashukela ukuthuthukisa umphumela wezidakamizwa ze-antibacterial. Ngakho-ke, umthamo ungancishiswa kakhulu, ngesinye isikhathi ungakuyeka ngokuphelele ukusetshenziswa kwama-antibiotic nganoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela.
Ama-cranberry aqinisa amasosha omzimba, avuselela umzimba, avimbele ukuguga kokuqala. Ezimweni ezinamandla zohlobo lwe-2 mellitus yesifo sikashukela, kubaluleke kakhulu ukuvikela ukwakheka kwezilonda ezisesimweni sokuqina kanye nesimo esifana ne-gangrene ku-mellitus yesifo sikashukela.
Ama-cranberry ayasiza kakhulu ekusizeni. Ivuselela ukuvuselelwa kwezicubu, ngenkathi kuvimba ukukhula kwamaseli angaphandle, angajwayelekile.
I-berry ingaxazulula izinkinga ngombono, njengoba igcina ingcindezi ejwayelekile yempi kanye ne-intraocular. Ingozi yokuthola i- glaucoma kuhlobo 2 sikashukela incishiswa kakhulu.
Lapho ama-cranberries efakwa ku-contraindication
Ama-organic acid kanye nokungabikho ngokuphelele kwe-glucose, okwenza ama-cranberries abe lusizo kangako, nakho kuyimbangela yokuthi ama-cranberries angadli:
Iziguli ezinokwanda kwe-acidity yesisu.
Nge-gastritis, i-colitis kanye nokuvuvukala okunamandla komgudu wesisu.
Ngokuthambekela kokungezwani kokudla.
Okubalulekile: ujusi omuncu wamajikijolo ungathinta kabi i-enamel yezinyo, uwonakalise. Ngakho-ke, ngemuva kokudla amajikijolo, kunconyelwa ukuxubha amazinyo akho bese usebenzise amahlanga okuwohloka wethambo lomlomo.
Ungayisebenzisa kanjani inzuzo ephezulu yohlobo 2 sikashukela
Inkomba ye-glycemic ku-cranberry entsha nejusi yehlukile. Amajikijolo, angama-45, nakuljusi - 50. Lezi izinkomba eziphakeme impela, ngakho-ke awukwazi ukusebenzisa kabi ama-cranberry nezitsha ezivela kuwo. Umthamo omkhulu ovunyelwe nsuku zonke ngamagremu ayi-100 womkhiqizo omusha.
Uma imenyu iqukethe ama-carbohydrate amaningi, inani lama-cranberry ngosuku kufanele ancishiswe libe ngama-50 amagremu. Ama-cranberry angasetshenziswa ukwenza i-jelly, tee, compotes, amasoso kanye ne-gravy.
Kepha ngaphezu kwakho konke kuyindlela yesiphuzo sezithelo. Ngakho-ke kumajikijolo cishe wonke amavithamini nezinto eziwusizo ziyasindiswa.
Umuthi wendabuko wokuqina komzimba uncoma ukuphuza okungenani u-150 ml wejusi we-cranberry osanda kufakwa nsuku zonke. Lokhu kuvikela okuthembekile nokufakazelwe emgomeni kanye nokuntuleka kwamavithamini.
Ukuguqula imenyu, ikakhulukazi yezingane, ungenza ijeli ngokwendlela elandelayo:
Hlambulula ama-cranberry ayi-100 g, hlunga bese uchoboza.
Bilisa uhhafu wamalitha amanzi epanini. Cwilisa i-15 g ye-gelatin emanzini abandayo.
Faka amazambane abunjiwe ku-stewpan, akuyeke ubilise bese upheka eminye imizuzu emi-2.
Susa le ngxube emlilweni, ngokushesha engeza u-15 g weshukela obambele kanye ne-gelatin, uvuse kuze kube yilapho usuqunjelwe ngokuphelele.
Thela ujeli ube isikhunta futhi upholile.
Ithiphu: ama-cranberry angakubekezelela okokuqandisa, ngaphandle kokulahlekelwa ngokuphelele ukunambitheka kwawo kanye nezindawo zokuphilisa. Vuna amajikijolo amasha ukuze uzowasebenzisa futhi uwasebenzise phakathi nenkathi yonke ekwelapheni nasekuvimbeleni isifo sikashukela.
Ukuze uthuthukise ukugaya, umbono kanye nesimo sesikhumba, kunconywa ukulungiselela iqhude elinjalo:
Cwilisa ujusi kusuka ku-cranberry kanye izaqathi - kufanele kuphume 50 ml,
Hlanganisa ama-jusi ne-101 ml yesiphuzo sakho sobisi osithandayo - iyogathi, i-kefir, ubisi,
Sebenzisa njengendlela isidlo sasemini noma isidlo sasemini.
I-Cranberry Juice Recipe
Lesi siphuzo siletha izinzuzo ezinkulu hhayi kulabo abanesifo sikashukela. Isebenza kahle kwi-nephritis, cystitis, isifo samathambo nezinye izifo ezihambisana nokufakwa kukasawoti. Ungayipheka ngokushesha futhi kalula ekhaya.
Hlikihla ingilazi yamajikijolo amasha noma eqandisiwe ngokusebenzisa ngesihlungo nge-spatula yokhuni.
Khama ijusi bese uhlangana nengxenye yengilazi yefroses.
Cindezela uthele 1.5 l wamanzi, ulethe ku-ngamathumba, ake epholile futhi nzima.
Hlanganisa ujusi kanye nomhluzi, usebenzise phakathi nosuku, uhlukanise phakathi kwenkonzo engu-2-3.
Isiphuzo sezithelo sisiza ngokulinganayo kuhlobo olushisayo nolubandayo. Ngemuva kwenkambo yokwelashwa yezinyanga ezingama-2-3, inani le-glucose esegazini kufanele lizinze.
Ngingakwazi ukudla i-cranberry yesifo sikashukela sohlobo 2
Ama-cranberry - amajikijolo asendle, akhetha inhlabathi ezinomswakama omanzi. Ukunambitheka kwamajikijolo avuthiwe kumuncu, kepha, ngaphandle kwalokhu, lo berry uyahlonishwa ezifundeni ezisenyakatho zomhlaba. Kwamanye amazwe - eMelika, eCanada, eBelarus kwakulinywa, kukhona amasimu amakhulu lapho kutshalwa khona ama-cranberry.
Imbali ifana ne crane emincane emi emlenzeni owodwa, ngakho-ke lo bhero ubizwa ngokuthi i-crane, i-crane.
Kuphakama imibuzo: ama-cranberry azibonakalise enazo, yiziphi izimfanelo azivezile emhlabeni, yini igunya phakathi kwamajikijolo? Futhi-ke, umbuzo obaluleke kakhulu: kungenzeka yini ukuthi udle ama-cranberries wesifo sikashukela? Ukuze siphendule yonke le mibuzo, sizokwazi ukwakheka kokudla okunempilo kwalesi sithelo sebheshi.
Yikuphi ama-cranberry enziwe ngawo
Ama-cranberry angamanzi angama-89%, lapho ama-asidi, amavithamini nezinye izakhamzimba ziqedwa. Iqembu le-BJU lincane. Amagremu ayi-100 amajikijolo aqukethe:
amaprotheni - 0.5 g, okuyi-0,61% yesilinganiso sezinsuku zonke,
amanoni - 0,2 g, noma u-0,31% wesimo esenzeka nsuku zonke,
ama-carbohydrate - 3,7 g, noma u-3.47%.
I-fiber yokudla iqukethe i-3.3 g, noma i-16.5% yokudliwa kwansuku zonke. Imicu yokudla iphazamisa ukufakwa kwama-carbohydrate egazini bese iwakhipha emzimbeni. Inkomba ye-glycemic ingama-45. Kukhulu kakhulu, kepha kwiziguli ezinesifo sikashukela isigamu sengilazi yamajikijolo semukelekile. Iqukethe iyunithi lesinkwa elingaphansi kwe-1.
I-Swamp berry inothile ku-Vitamin C. Kulokhu, ingancintisana nolamula nezinye izithelo ezihlukile. Amagremu ayi-100 aqukethe ama-17% abantu abathatha nsuku zonke amavithamini C.
Ukuba yi-antioxidant, uvithamini C uvikela umzimba kumakhaza.
Cishe u-7% wesimo esivamile sansuku zonke kuma-cranberries okuqukethwe kwe-Vitamin E (alpha-tocopherol), okubuye kube yi-antioxidant ne-immunomodulator enamandla.
Kubalulekile ukwazi ukuthi ukunambitheka kwe-asidi ye-berry kunikezwa yi-malic kanye ne-citric acid. Ama-cranberry a-contraindicated kubantu abahlushwa i-gastritis ene-acidity ephezulu.
Ukuchichima kwama-acid anolaka ku-cranberries akucasuli kuphela isisu, esidalwa yi-gastritis. Ama-acid athukuthelisa amathumbu, ngakho-ke kunconywa ukuthi unciphise ujusi we-cranberry namanye, amajusi angathathi hlangothi (ngokwesibonelo, isanqante, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi), lungiselela ukunyakazisa izithelo, amajusi amasha. Kumele kwaziwe ukuthi ujusi we-celery unomthelela omuhle ekusebenzeni kwamanyikwe.
Kunama-acid amaningi e-organic asekwindla ekwindla kunalowo owabethelwa isithwathwa. Kepha ku-berry eqandisiwe, inani leshukela likhuphuka.
Amajikijolo asenyakatho aqukethe i-calcium, i-magnesium, ifosforasi nensimbi.
Ukudliwa kwe-magnesium kwesifo sikashukela kubalulekile, ngoba lesi sici somkhondo sibandakanyeka ezinqubweni ze-metabolic, ekuhanjisweni kokufakwa kwezinzwa.
I-Magnesium ibalulekile ekusebenzeni kwenhliziyo, nayo ehlushwa yimiphumela yesifo sikashukela. Iron ibandakanyeka ku-hematopoiesis. Ngokwesilinganiso, amagremu ayi-100 ama-cranberry aqukethe i-3.5% yedosi yansuku zonke ye-magnesium nensimbi.
Umphumela ushukela wegazi
Abanye abanesifo sikashukela abaphupha ngokuthola umkhiqizo onciphisa ushukela bangase bazibuze: Ingabe i- cranberry yehlisa ushukela wegazi?
Ukuze siphendule lo mbuzo, ake sibuyele ekubunjweni kwaso futhi sibheke umphumela wezinto zakhona emzimbeni. Kusuka ku-asidi oqukethwe
i-uricolic acid. Iguqula amanqamuzana anqwabelene anqwabelene (okuthiwa-mhlophe) abe ngamafutha ahlanganisayo (ansundu), osha ngokushesha phakathi nomsebenzi womzimba, anikeze umzimba amandla adingeka kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ine-anti-inflammatory, antimicrobial effect, evikela isibindi.
Ama-chlorogenic acid athinta ukuncishiswa kashukela, i-cholesterol excretion, avikele isibindi ekulimaleni.
Ama-cranberry nawo ane-betaine, ama-catechin anemiphumela ye-antioxidant.
Kuyiqiniso, ama-cranberry awakwazi ukufaka i-insulin, kodwa ngokuhambisana neminye imikhiqizo nemithi, kuzoba nomphumela wokuphulukisa umzimba futhi ube wusizo kulowo onesifo sikashukela.
Uma udla ama-cranberry njalo, kepha kancane kancane, khona-ke izinto nezinto ezincane eziqukethwe amajikijolo zizolwa namandla okubhubhisa alesi sifo, kube nomthelela omuhle emithanjeni yegazi nakwezinye izingxenye zomzimba.
Ama-diabetes, njengomthetho, ahlushwa umfutho wegazi ophakeme, futhi kulokhu ama-cranberry awusizo ngoba anciphisa ingcindezi.
Kodwa ama-hypotonics kufanele azi ukuthi ama-cranberries kungenzeka angabi nabungane kakhulu kuwo. Ngakho-ke, ngemuva kophudingi nale berry, kunconywa ukuphuza inkomishi yekhofi.
Ama-Cranberries for diabetesics awakwazi ukuthatha indawo nge-insulin, kodwa, noma kunjalo, ngeke avumele ukwanda koshukela wegazi. Abantu abanesifo sikashukela banenkinga yokuchama kaningi, futhi lokhu kuholela ekuthelelekeni kwezifo zezitho zangasese. Ngakho-ke ama-cranberry ayakwazi ukulwa nezifo ezithathelwanayo zezitho zangasese kanye nezinso. Ama-enzyme aqukethe ku-berry afaka isandla ekuqinisweni kwempilo yabesilisa kanye ne-potency.
Ungavuna kanjani amajikijolo ukuze uwasebenzise ngokuzayo
Ekuphetheni, kufanelekile ukusho ukuthi ama-cranberry agcinwa emisha, omisiwe futhi eqandisiwe. Kuvunwa ngesimo sejusi, ama-compotes kanye nejams.
Kuliqiniso ukuthi ujamu ophekwe ushukela ukhonjelwe abanesifo sikashukela, kodwa kwamukeleka ngokuphelele ukwenza ujamu kwabamnandi. Ngaphezu kwalokho, ama-cranberry aphathwa ngokushisa futhi agingwe agcinwa ngaphandle kokubakhona koshukela noma ezinye izinto ezigciniwe.
Amajikijolo aqukethe i-benzoic acid, yona uqobo iyisiguli. Ngakho-ke, ama-cranberry angavunwa ukuze asetshenziswe esikhathini esizayo.
Ama-berry omuncu azosebenza njengesengezo esihle kuma-saladi, kuwo ungalungisa isoso senyama (ikakhulukazi uma inyama inamafutha), inhlanzi. Izindandatho zika-anyanisi ezihlanganisiwe zizoba zingcolile uma zifafazwa ngejusi le-cranberry.Futhi-ke, ujusi we-cranberry uzoqabula kahle ngosuku olushisayo lwasehlobo, futhi wondle umzimba ngamavithamini ngaphandle kokulimaza kakhulu esiswini. UMorse angadakwa futhi ashise.
Ama-cranberry wesifo sikashukela sohlobo 2: Ukusetshenziswa Okufanele
Ama-cranberry asetshenziswa ngenkuthalo ekwelapheni nasekuvimbeleni izifo eziningi. Ngokusebenza ngokulingana okuphezulu, bazosiza bobabili uma kungenzeka bangenwe yigciwane, futhiephule ukusebenza kwezindlala ze-endocrine, kufaka phakathi namanyikwe.
Ama-cranberry abongelwe kusendulo ngenxa yokwakheka kwawo okuhlukile. Izici zayo ezizuzisayo kanye ne-contraindication kufanele zibhekwe ngesifo sikashukela sohlobo 2.
Izinzuzo nezakhiwo zokwelapha
Ama-cranberry ohlobo 2 sikashukela abhekwa njengomthombo wamavithamini: C, iqembu B, kanye ne-ascorbic, i-nicotinic acid. Okuqukethwe kwezithako eziwusizo ze-organic nakho kuphakeme, ngokwesibonelo, i-oxalic, i-malic, ne-asidi.
Ngenxa yomthelela wayo osebenzayo wokulwa nokuvuvukala kanye nesethi yamavithamini emzimbeni, ama-cranberry asiza ngokumelene namanxeba angapholi, amakhaza, ikhanda. Ukukhishwa kwe-Berry kuyabonakala futhi kusetshenziswe kwezokwelapha ezisemthethweni.
Ukusetshenziswa njalo kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2 kuqinisa imithambo yegazi emincane nemithambo, kunciphisa ubungozi bemithambo ye-varicose, kwehlise umfutho wegazi futhi kuvume ukusebenza kohlelo lwe-excretory. Ama-cranberry kushukela lesifo sikashukela athuthukisa isenzo sezidakamizwa ezivela ku-jade, isihlabathi ezinso.
Embuzweni wokuthi kungenzeka yini ukuthi kudliwe ama-cranberry kushukela, odokotela baphendula kahle. Umkhiqizo uvuselela amandla omzimba omzimba, uvimbela ukuguga ngaphambi kwesikhathi, ususe ubuthi emangqamuzaneni.
Lesi sifo sifaka ukuphulukiswa kancane kwamanxeba, ngakho-ke ama-cranberries kushukela leshukela akhuthaza ukuvuselelwa kwezicubu, ukuphulukiswa kwamanxeba nezilonda. Kufakazelwe ukuthi amagilebhisi amakhulu anciphisa ingcindezi ye-intraocular, aphakamise i-retina futhi alwe ne-glaucoma esiteji sokuqala.
Ukufakwa ekudleni kwabashukela
Ochwepheshe kade banquma ukuthi kungenzeka yini ukudla ama-cranberry kushukela. Kepha eminyakeni embalwa edlule kwabonakala ukuthi i-berry ingumuthi wangempela walesi sifo, okwehlisa amazinga kashukela. Ngefomu elithembela i-insulin, nalo linomphumela omuhle, kepha isenzo sihlose ukuvikela i-hyperglycemia.
Ngesikhathi sokucwaninga, iqembu lokuhlola lalinikwa nsuku zonke i-cranberry ekhishwe, elilingana nengxube nengilazi yejusi yemvelo. Isenzo sichazwa yikhono lokukhuthaza ukukhiqizwa kwe-insulin.
Ngakho-ke, ngokusetshenziswa nsuku zonke kwe-200-250 ml yesiphuzo izinyanga ezimbalwa, hhayi kuphela inkomba ye-glucose iyaqina, kodwa futhi nemikhumbi ihlanza i-cholesterol. Le ngxenye ingahlukaniswa ngama-reception amaningana, okungenzeka, njengengxenye yezitsha neziphuzo.
Izitsha ezinama-cranberry kanye nejusi le-berry
Amaresiphi ahlukahlukene kakhulu: lezi iziphuzo ezibandayo nezishisayo, ama-dessert, amasosa.
Isiphuzo soju siqukethe ilitha lamanzi, ingilazi yamajikijolo kanye nezipuni ezi-2 zikaju olusha. I-freckle egeziwe ihlutshiwe noma ichotshozwe ku-blender. Ijusi likhishwa ku-puree lifakwe endaweni epholile. I-slurry eseleyo ithululelwa ngamanzi abilisiwe, alethwe ngamathumba bese ibilisiwe eminye imizuzu engama-5-7. Ijusi noju kufakwa esiphuzweni esifudumele.
Ijusi le-cranberry lisiza ukunciphisa ubungozi bezinkinga zesifo sikashukela futhi libuye luthuthukise umphumela wezidakamizwa ezilwa ne-antibacterial. Ukuze wenze isiphuzo, udinga ukufaka ingilazi yama-cranes. Cwilisa kuthululelwa ilitha elilodwa lamanzi namathumba. Ngemuva kokuhlunga, ijusi lithululelwa emhluzi bese kushukela omncane noma i-sweetener.
Ukulungiselela ijeli elimnandi, udinga kuphela i-100 g entwasahlobo. Cwilisa kuthululelwa kumalitha amanzi ayi-0,5 kanye nokushisa kuze kube ukubila. I-3 g yejelatin, ehlanganiswe nejusi, ingeniswa emhluzi ohluziwe futhi iphinde ilethwe ngamathumba. Ngemuva kwalokho, kufakwa i-15 ml yamanzi abilayo nejusi esele Ngemuva kwamahora ambalwa, ijeli elichithekile ekubunjweni futhi laqina selilungele ukusetshenziswa.
Contraindication kanye nemikhawulo
Inani elikhulu lezinto ezinamandla elinamandla lingadala ukulimala uma lisetshenziswe kabi. Ngezifo ezimbalwa zepheshana lesisu, umkhiqizo ubekiwe.
Lokhu kufaka phakathi i-gastritis, i-acidity ekhuphukayo yejusi yesisu, ukushisa kwenhliziyo, nezifo zesibindi ezinzima. Ngokuvamile, ngalezi zifo, noma iyiphi i-acid ayenqatshelwe izithelo, imifino kanye namajikijolo.
Ama-organic acid angenza isimo sesiguli sibe sibi kakhulu. Uqweqwe lwendwangu olubuthakathaka nalo luhlushwa amajikijolo amasha.
Kunoma yikuphi, ama-juices angenakulungiswa angadala ukucasuka kwamathumbu nesisu futhi kubangele ukulimala okukhulu kulwelwesi lwama-mucous. Ochwepheshe batusa ukuphuza iziphuzo zezithelo.
Ngingakwazi ukudla i-cranberry yesifo sikashukela?
Kwelinye ikhambi, ama-cranberry esifo sikashukela asetshenziswa kabanzi ukwehlisa ushukela wegazi.
Amajikijolo akhiwa ngezinto eziningi ezizuzisayo ezithinta ushukela kahle, zivuse amanyikwe, zivimbele ukukhuluphala, futhi zithuthukise isimo sesikhumba.
Ama-cranberry asetshenziselwa ukwenza iziphuzo zezithelo, ijeli, ezisetshenziswa njengezengezo ezitsheni futhi umane udle okusha. Kodwa ngaphambi kokusebenzisa, udinga ukubonana nodokotela, ngoba lesi sitshalo sinokuphikisana.
Ukwakheka nezakhiwo eziwusizo
Amagremu ayi-100 ama-cranberry amasha aqukethe ama-kilocalories ayi-26. Inkomba yayo ye-glycemic ingama-29. Izinkomba ezinjalo zibonisa ukuthi izithelo ziqukethe ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi agaywa kalula futhi awagcinwanga emafutheni. Esikhathini sikashukela, lokhu kubalulekile ngoba ukuphazamiseka kwe-metabolic kuvame ukuholela kwesisindo somzimba ngokweqile. Izinto ezinenzuzo ezitholakala kuma-cranberry zikhonjiswa etafuleni.
Isakhi Izici eziwusizo
IGlucose (Dextrose) Ibuyisela amandla omzimba alahlekile
Ukuzola ezimweni ezicindezelayo
Usekela umsebenzi wenhliziyo, izicubu kanye nohlelo lokuphefumula
Ilawula ukuhanjiswa kokushisa
Uhlaka Akwenyusi noma anciphise ushukela kushukela (glycemia ezinzile)
Ugcwalisa umzimba ngamandla
Amavithamini eqembu B, C, K Qinisa ukungatheleleki
Phulukisa izilonda zesifo sikashukela kushukela
Shintsha umsebenzi wegaya wokugaya ukudla
Pectin Kuthuthukisa ukuhamba kwegazi kuma-capillaries
Isiza ukukhipha umzimba emzimbeni
Inezinto ezilwa nokuvuvukala
Ama-organic acid Alkalize umzimba
Thuthukisa imetabolism yamandla
Banomphumela we-antibacterial and antifungal.
Catechin Ivimbela umdlavuza
Landelela izinto Kubaluleke kakhulu kuzo zonke izinqubo zomzimba ezinkulu.
Kungani ama-cranberry alungele ushukela
Ama-cranberry ayingcebo yamavithamini anomphumela omuhle emzimbeni wonke. Izithelo ezinhle ezinoshukela, ujeli, iziphuzo zezithelo, amasoso zingenziwa kuwo futhi zingasidla zintsha. Kunconyelwe ukuthi kusetshenziswe odokotela kanye nabezokuhlinza. Le berry ilwa nokubandayo nezifo ezibangelwa amagciwane.
Ama-cranberry asiza ukulwa:
ngezifo eziningi ezithathelwanayo
Amajikijolo we-cranberry alwa ngokuphelele nama-vein blockage ngama-begi wegazi, axazulula ama-plaque, enza izindonga zesithambo segazi ziqine. Amafutha asuselwa ku-Cranberry aphatha i-psoriasis, eczema, ukusha, i-lichen, i-scrofula.
Ama-cranberry anomthelela omuhle esizalweni sokugaya:
kuqinisa indlela yokugaya ukudla
ikhulula izimpawu ze-gastritis
kuvimbela ukubonakala kwezilonda zesisu.
Ama-cranberry abhekana nezinkinga zomgodi womlomo:
ivimbela ukubola kwamazinyo,
uphatha izinsini zokopha.
I-Cranberry ithuthukisa isimo sesikhumba:
ivuselela futhi iphume ngisho nobuso bethoni,
kunikeza imfushane yemvelo.
Ukusetshenziswa kwama-cranberry kwehluke kakhulu futhi nomaphi lapho kuthola umphumela wokupholisa.
Amajikijolo aneqhaza ekuphulukisweni kwezilonda kwez Diabetes.
Ama-cranberry ohlobo 2 sikashukela kufanele afakwe kwimenyu yeziguli. Iphansi kumakhalori futhi inenkomba ye-glycemic ephansi. Ngoba i-berry igcwala umzimba ngoshukela wemvelo oludingekayo, kepha ayigcwalisi i-pancreas futhi idinga ukukhiqizwa okuncane kwe-insulin.
Esikhathini sikashukela, imithambo yegazi ihlushwa ushukela omningi. Igazi ligcwalisa kahle umzimba nge-oxygen, ethinta isikhumba. Izithelo zesitshalo zibuyisela imithambo yegazi, zithuthukise ukuphuma kwegazi futhi ziphilise izilonda ezishisayo. Ama-cranberry ayasiza kuma-diabetes ngoba aqinisa umzimba futhi awuthambisa ngamavithamini, esiza ukumelana nokutheleleka.
Izithelo zinempahla yokugaya futhi kushukela ikhipha i-edema.
Ama-cranberry angadliwa amasha ngaphandle komkhawulo. Hlambulula kahle ngaphambi kokudla. Ungenza ujusi. Kulokhu, izithelo kufanele zifakwe kwi-juicer futhi ziphuze isiphuzo esiphumela ngangokuthanda kwakho, kungakhathaleki ukuthi kudliwe kangakanani. Futhi ungenza ujusi we-cranberry. Izindlela zokupheka zilula:
Mash amajikijolo abe yi-gruel.
Dlulisela ku-cheesecloth bese usipitshiza ukhiphe ujusi.
Faka amanzi asobala epulpiti ubilise.
Hlikihla inhlanganisela ephumela futhi, uthele ku ujusi bese ufaka okunye okushukela.
Inani lesiphuzo sezithelo ngosuku alinamkhawulo.
Phuza izinyanga ezi-2.
I-jelly yale amajikijolo ihlukanisa amakhekhe nsuku zonke ezigulini.
Cindezela ujusi kusuka amajikijolo bese ufaka i-gelatin encane.
Faka amanzi kukhekhe, ubilise futhi uzinanise.
Hlanganisa izithako ezivelayo bese ubilisa futhi.
Faka ushukela obambele.
Thela ingxube ibe isikhunta.
Amaqabunga eCranberry aqukethe i-arbutin, evimbela ukwakheka kwamaseli womdlavuza futhi abe nomphumela omuhle ohlelweni lomchamo. I-decoction ingabuye isetshenziswe njengama-lotions kuzilonda ezithinteka yizilonda, inqobo nje uma kungekho nqubo yokuvuvukala yokuhlanza. Yenza itiye kanjena:
Thela isipuni samaqabunga omisiwe ngamanzi abilayo.
Faka imizuzu engu-15 nobunzima.
Phuza umhluzi obilisiwe njengetiye kungabi ngaphezu kwezindebe ezimbili ngosuku.
Izinzuzo kanye ne-contraindication yama-cranberries wesifo sikashukela
Iningi labanesifo sikashukela bayazibuza ukuthi bangadla yini ama-cranberries. Impendulo iyakhanya impela, ngoba iqukethe izinto eziningi eziwusizo, ama-asidi kanye nezinto zokulandela umkhondo. Kodwa-ke, kufanelekile ukutadisha ngokucophelela ukwakheka kwayo, usizo lwayo, izindlela zokupheka kanye ne-contraindication engenzeka.
Isifo Sikashukela se-Cranberry
Ngaphambi kokusebenzisa ama-cranberries, abanesifo sikashukela kufanele bazijwayeze ngokucophelela ngezakhiwo zalo zokwelapha neziqinisa umzimba:
Uma udla le berry nsuku zonke, khona-ke unganciphisa kakhulu ingozi yokuhlakulela unyawo lwesifo sikashukela kanye ne-furunculosis.
Ijusi le-cranberry linganciphisa ushukela wegazi. Kwanele ukuphuza 1 ingilazi yejusi nsuku zonke futhi ngemuva kwenyanga ungabona imiphumela yangempela.
Vele ungazibandakanyi nenani elikhulu le-cranberry juice, uma kungenjalo ungalimaza kakhulu impilo yakho.
Ukusetshenziswa njalo kwama-cranberry kuzosiza ukwehlisa umfutho wegazi, futhi lokhu kunciphisa ubungozi be-pathologies ehlobene noshukela.
Ama-cranberry azosiza abanesifo sikashukela ukuba basuse ubuthi kanye nobuthi obuyingozi. Ibuye iqede i-cholesterol emibi futhi inesandla ekunciphiseni isisindo somzimba.
Ujusi we-cranberry awudliwanga muva ungalungisiwe. Kuyelulekwa ukupheka iziphuzo zezithelo kuyo, thela ngamanzi noma uthele itiye.
Naphezu kweqiniso lokuthi ama-cranberry alusizo kakhulu, abanesifo sikashukela kufanele bakwenzele ukusetshenziswa kwabo rationally nangokucophelela. Kubalulekile ukwazi ukuthi ungayipheka kanjani ngendlela efanele, ukuthi ufisa ukuyisebenzisa ngaluphi uhlobo, nokuthi imiphi eminye imikhiqizo engahlanganiswa nayo.
Ijusi le-cranberry elihlanzekile linambitha omuncu kakhulu futhi linomunyu othile. Ukuyiphuza esisanda kufakwa akunconywa ngokuphelele, ngoba ungathola ukungakhululeki esiswini ngesimo sokushiswa kwenhliziyo.
Indlela enhle kunazo zonke yokudla ujusi we cranberry ukwenza izithelo ziphuzwe kuyo. Ijusi ithinta ngokuqinile ama-pancreas futhi ivuselela ukwehla okungokwemvelo koshukela wegazi. Ujusi we-cranberry akufanele udliwe isikhathi esingaphansi kwezinyanga ezintathu, ngakho-ke kufanelekile ukuthatha ikhefu elithatha inyanga yonke ukuze ungalethi umzimba wakho ngokweqile uvithamini C futhi ungaphazamisi umgudu wokugaya ukudla.
Amanye amajusi angafakwa ku-cranberry juice: isanqante, i-apula, ithanga. Ungapheka ne-jelly elimnandi kuyo. Kunezinketho eziningi zokusebenzisa ujusi we-cranberry, futhi ukukhetha kungahle kuncike kokuthandwayo kwakho.
I-dessert emnandi yabashukela yi-cranberry jelly. Kuyelulekwa ukusebenzisa i-dessert enjalo ngezingxenye, ingahlukaniswa ngezinsuku ezingama-2-3. Kuleli fomu, ama-cranberry ngeke acasule umgudu wokugaya ukudla.
Ukupheka kuyashesha futhi kulula. Kwanele ukuthambisa ujusi we-cranberry kusuka kumajikijolo, uwuhlikihle ngoketshezi (ujusi wezithelo noma amanzi) bese ubeka esitofini, ulinde amathumba.
Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi senqubo yokubilisa, engeza obambele ushukela (mhlawumbe i-xylitol, kuyasiza) kanye ne-gelatin kulolo ketshezi. Letha futhi ubilise, bese kuthi ngemuva kwemizuzu emi-5 ungayithululela isikhunta (noma ama-mini-tins).
Shiya ukuze upholile (mhlawumbe esiqandisini amahora angama-4-7).
Lapho ubila, iningi lamavithamini nezakhi zomzimba lingabhidlika, ngakho-ke ijeli eliphelile liyoba nenani elincane kunejusi elihlanjululwe kalula.
I-Cranberry jelly izokhanyisa ukudla okulinganiselwe kwesifo sikashukela futhi inikeze amandla namandla amaningi.
Ama-cranberry angumkhiqizo othandwayo futhi izitsha eziningi ezisuselwa kuwo kungenzeka zingalingani netafula lesifo sikashukela. Ngakho-ke, isibonelo, i-cranberry jam i-contraindicated kushukela, ngoba ilungiselelwe ngesisekelo ushukela. Ake sibheke ukuthi yiziphi izindlela zokupheka ezingasebenza kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 1 noma uhlobo 2.
Qhwalela i-berry efrijini. Ezingxenyeni ezincane ezitsheni ezilahlayo noma imishanguzo.
Misa i-berry bese uyihlela emasakeni ahlukene.
Senza i-cranberry tincture.
Kwelitha elilodwa lamanzi, ungangeza i-1 cranberry eyodwa. Ungangeza ushukela esikhundleni ukuze uqede noma uwuphuze omuncu. I-compote ilethwa esigabeni sokubilisa futhi isuswe ngokushesha emlilweni (ukuze ungagayi zonke izinto eziwusizo). Ungaphuza i-compote nganoma yisiphi isamba, ngoba awekho amajikijolo amaningi lapho.
Amajikijolo ama-cranberry angagcotshwa ngoju. Le ngxube ilwa ngokuphelele namakhaza futhi inomphumela onenzuzo emzimbeni onesifo sikashukela. Uju lwe-cranberry luhamba kahle ngetiye elishisayo, amasangweji futhi lingaba ukugcwaliswa kwamaphayi.
Inhlanganisela yewolintshi enephunga elimnandi enama-cranberries ilungiswa kalula. Kwanele ukuhlanganisa i-berry encane ne-1 orange nge-grinder yenyama noma nge-blender. Faka ushukela obambele (mhlawumbe uju) kwinhlanganisela ephumayo. I-delicacy emnandi futhi enempilo isilungile.
I-Cranberry Meat Sauce
Ilungele ingulube nenyama yenkomo. Ujusi we-cranberry kumele ungezwe kwinhlanganisela yamakhambi, pepper kanye notamatisi. Thela inyama eshisayo emfuleni omncane wesoso.
Akunzima ukulungiselela i-cranberry tincture, vele ulandele imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo:
Lungisa ama-cranberry (cishe ama-270-310 amagremu), i-vodka (isigamu se-litre), ukufaka esikhundleni sikashukela (1 inkomishi).
Knead cranberries esimweni se-gruel.
Faka amajikijolo achotshoziwe embizeni noma ebhodleleni.
Thela yonke i-vodka.
Faka ushukela esikhundleni bese uxuba konke.
Sivalela uketshezi sibeke endaweni ebandayo futhi emnyama izinsuku eziyi-10-15.
Sikhipha uketshezi, siluhlunge bese silubeka endaweni efanayo futhi, amasonto angama-3-4 kuphela.
Isiphuzo esinamandla sikulungele ukuphuza. Ukuqapha, utshwala bungayilimaza impilo yakho.